घर बस्ने श्रीमतीलाई श्रीमानबाट तलब – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
घर बस्ने श्रीमतीलाई श्रीमानबाट तलब
काठमाडौं, २४ भदौ । आफ्नै श्रीमतीलाई श्रीमानले तलब दिने कुरा कति व्यवहारिक हुन सक्ला ? रोचक मात्रै होइन यो प्रश्न पेचिलो पनि छ । तर, अब भारतीय गृहिणीहरुले छिट्टै नै आफ्ना श्रीमानबाट मासिक तलब भने पाउने भएका छन्।
घर बसेर घरायसी काम गर्ने श्रीमतीहरुलाई आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रकम दिन बाध्य बनाउने प्रस्ताव भारत सरकारले पास गर्न लाग्दैछ। त्यहांको महिला तथा बालबालिका विकास मन्त्रालयले गृहिणीहरुको सामाजिक आर्थिक स्तर उकास्न यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार आगामी हप्ता भारतको केन्द्र सरकारले राज्य सरकारहरुसित यस बारे छलफल गर्दैछ।
महिलाहरुले घरैमा बसेर गर्ने कामलाई पनि आर्थिक गतिविधिअन्तर्गत ल्याउनु पर्ने धारणासहित यो प्रस्ताव आएको हो। यसले भारतको जीडीपी बढ्ने विज्ञहरुको ठहर रहेको छ ।
२५ भाद्र २०६९, सोमबार १०:२१ मा प्रकाशित